अनुदान दुरूपयोग: मन्त्री आरतीकै मिलेमतो
फर्जी कागजात बनाएर अनुदान भुक्तानी
बिहिवार, कार्तिक २१, २०७६ सेतोखरी
नेपालगन्ज : प्रदेश पाँचमा वितरण भएको कृषि अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी पशुतर्फको रकम दुरूपयोग भएको संसदीय समितिले बताएको छ ।
प्रदेशक १२ जिल्लामध्ये तराईका ६ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै दुरूपयोग भएको हो । कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीले कमिसनकै लागि कामै नगरेकाहरूलाई समेत लाखौं रकम भुक्तानी गरेको भेटिएको छ ।
बाँकेको उज्ज्वल सहकारीले दूध डेरीका लागि प्रदेश सरकारबाट ११ लाखभन्दा बढी रकम अनुदान लिएको रेकर्डमा फेला परेको छ । निर्देशनालयले सो बापतको रकम भुक्तानी गरिसकेको छ ।
रकम भुक्तानी गर्नुअघि मन्त्रालयकै अनुगमन समितिले डेरीको अनुगमन गरेर पैसा दिन भनेको छ । तर, बाँकेमा न त्यो सहकारीको कार्यालय छ । न त डेरी नै ! निर्देशनालयले डेरी नै नभएको सहकारीलाई फर्जी अनुगमनको कागजात बनाएर अनुदान भुक्तानी गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
प्रदेशमा कृषि अनुदान वितरणको कार्यविधिको फाइदा लिँदै कर्मचारीकै मिलेमतोमा रकम दुरुपयोग भएको भेटिएको छ । कार्यविधिमा १५ दिनअघि दर्ता भएको फर्म वा सहकारीले अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसअघि नै संसदीय समितिले कम्तीमा एक वर्षअघि दर्ता भएको संस्था वा फर्मलाई मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कर्मचारी आफैंले कार्यविधि सच्याएर अनुदान वितरण गरेका छन् ।
‘संसदीय समितिले गरेको निर्देशन किन अटेर गरियो, समितिका सदस्य चेतनारायण आचार्यले प्रश्न गरे, ‘कार्यविधिबाटै चलाखी गरिएको छ ।’ अनुदान दुरूपयोग गर्नेमाथि कारबाही गर्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे । मन्त्रालयले निजी फर्मलाई लागतको ५० प्रतिशत र संस्थागतलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने कार्यविधि बनाएको छ ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले अनुदानको फारम भर्दासमेत किसानबाट कमिसन लिएको संसदीय समितिले जनाएको छ । ‘एउटा फर्म भरेबापत २५ हजार रूपैयाँ लिइएको रहेछ, एक सांसदले भने, ‘मन्त्रालयका उच्चपदस्थ व्यक्ति नै समूह बनाएर फाराम भर्न लागेका रहेछन् ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता विनोद घिमिरेका अनुसार अनुदानका लागि करिब ५ हजार आवेदन आएका थिए ।
मन्त्रालय मातहत चलेको स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमसमेत सूचक र मापदण्डबिना छ । त्यसको अनुदानमा समेत अनियमितता देखिएको छ । प्रदेश पाँचको कृषि वन तथा वातावरण समितिले दुरूपयोग गर्नेबाट रकम असुली गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । तर, मन्त्री आरती पौडेल भने यस बिषयमा मौन बसेकी छन् । यसले पनि उक्त आर्थिक चलखेलममा मन्त्री पौडेलकै मिलेमतो तथा संलग्नता रहेको आशंका गरिएको छ ।
मन्त्री पौडेलले भनिन् ‘हामी आन्तरिक छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्छाैं ।’ उनले मन्त्रालयले पनि अनुदान दिएकाको अनुगमन गरिरहेको प्रस्टीकरण दिएकी छन् । मन्त्रालयले गठन गरेको अनुगमन समितिले भने कुनै कमजोरी देखाउन सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, कार्तिक २१, २०७६, ०८:११:००
बाँके आउन खोज्ने को–को छन् पावरवाला टप ५ एस पी ? आइतवार, जेठ १८, २०७७ 2496